Oge Ọgụgụ: 3 nkeji Germany nwere ugwu ndị mara mma, ime obodo na-eku ume, na cosmopolitan obodo nke na-eme ụgbọ okporo ígwè eme e ebe a-adọrọ ahụmahụ. E nwere ọtụtụ fabulous ebe ịhụ gụnyere Berlin, Munich, Hamburg, Cologne, na Frankfurt, na ọtụtụ ndị ọzọ. Ndị a hotspots na nta na-niile interconnected site a ọma haziri ahazi hi-ọsọ ụgbọ okporo ígwè usoro. Nke a…
Oge Ọgụgụ: 3 nkeji Venice bụ otu n'ime ndị kasị egwu na kpokọtara obodo na Italy na bụ mfe iji ụgbọ okporo ígwè. Site na ịga na Venice n'oge Ista ememe, ị pụrụ inweta obi ụtọ spring weather. Nke a na-enye ohere ị na-eji ihe niile ụbọchị n'èzí. Gaa njem akụkọ ihe mere eme…
Oge Ọgụgụ: 4 nkeji Lee ma na-enweta ọtụtụ ihe ndị ọzọ site na amalite a European ụgbọ okporo ígwè njem. Ejegharị ụgbọ okporo ígwè na Europe bụ quintessential usoro agaa leta Europe na ọ bụ ọ omimi mere. The okporo ígwè netwọk na-mepụtara nke ukwuu ka ndị njem nwere ike imeri otutu mba na omenala…
Oge Ọgụgụ: 3 nkeji Interrailing Atụmatụ na-ejegharị ejegharị na a mmefu ego bụ omume ma ọ bụrụ na ị na-eme atụmatụ njem gị nke ọma. Eri nke gbaa ụgbọ okporo ígwè, ulo, nri na ntụrụndụ na-adịgasị iche iche n'etiti mba na Europe, mana e nwere ọtụtụ ụzọ iji nụ ụtọ njem dị ọnụ-ala. Luckily, na ụfọdụ nkwadebe, ụgbọ okporo ígwè njem na…
Oge Ọgụgụ: 4 nkeji Njem na Europe site okporo ígwè bụ a longstanding omenala na-adịghị aga na a ọsọ ọsọ – Ụgbọ oloko na-kasị, ọtụtụ enyi na enyi, na ụzọ kachasị dị irè nke isi n'otu ebe gaa ebe ọzọ. Ọ bụ ezie na ụgbọ okporo ígwè anyị tiketi usoro-ewe ihe mgbu nke nhazi…